Vola Hydrafinil (9-Fluorenol) roahina (1689-64-1) - Phcoker
SKU: 1689-64-1 Sokajy: Drug Smart
Hazo voly Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1) video
Rohdy Hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1) Description
Ny Hydrafinil (9-Fluorenol) roja (1689-64-1) dia alika avy amin'ny fluorene. Ao amin'ny isomer, fluoren-9-ol na 9-hydroxyfluorene, ny vondrona hydroxy dia miorina eo amin'ny fatran'ny karbôna misy eo amin'ny roapolo benzena. Ny Hydroxyfluorene dia afaka mivadika ho fluorenone amin'ny ala. Izy io dia fotsy fotsy miloko fotsy amin'ny efitra fisainana.
Mandritra izany fotoana izany, ny vovo-dronono Raw Hydrafinil (9-Fluorenol) dia mpitsabo mpanentana mahaliana, manohitra ny torimaso sy ny tsy firaharahiana. Fanafody sy pro-drug of modafinil (fantatra koa amin'ny hoe Provigil) - fitambarana ampiasain'ny mpanamory fiaramanidina Airforce amin'ny asa fitoriana lava mba hiambina sy hiambina. Hydrafinil (aka 9-Fluorenol) koa dia ohatran'ny eugeroic nootropic izay mitovitovy amin'ny fihetsik'i Modafinil. Tany am-piandohana dia niompana fikarohana izy io mba hampiroboroboana ny fahamendrehana sy ny fahamalinana. Noho ny fahitana azy ho mpitsabo, dia lasa malaza eo anivon'ireo mpampiasa nootropic nandroso izy. Mahaliana fa ny mpampiasa dia mitatitra fa tsy mampisy fihenan-kery kokoa noho ny Modafinil, fa ny fahaiza-manaony kokoa hampiroborobo ny fahamalinana. Ny tombontsoa hafa dia mitatitra ny fampivoarana ny mason-tsivana, ny fanentanana mihamitombo, ny fanamafisana ny feo manintona, ny fiasa mahomby sy ny fahaiza-mianatra.
Vovon-drano vita amin'ny hydrafinil (9-Fluorenol) (1689-64-1)pecifications
Product Name Roahina Hydrafinil (9-Fluorenol)
Anarana simika Hydroxyfluorene;
9-Fluorenol; Fluoren-9-Ol; 9-Fluorenyl Alkohol; 9-Hydroxy-9H-fluorene; 9-Hydroxyfluorene;
Drug Class Aromatika, tontolo iainana, SMART fanafody
molekiolan'ny Formula C13H10O
molekiolan'ny Wvalo 182.222 g / mol
mitsonika Point 153-156 ° C
Tavy 275.62 ° C (tombanana)
Solubility Chloroform (malemy), methanol (kely)
Hydrafinil (9-Fluorenol) Application Ampiasaina amin'ny fitsaboana, ny vokatra ara-pahasalamana, ny sakafo, ny zava-pisotro, ny kojakoja, ny biologique sy ny chemical reagents ary ny indostria hafa.
Ny Hydrafinil (9-Fluorenol) roja (1689-64-1) dia alika avy amin'ny fluorene. Ao amin'ny isomer, fluoren-9-ol na 9-hydroxyfluorene, ny vondrona hydroxy dia miorina eo amin'ny fatran'ny karbaona eo amin'ny roapolo benzena. Ny Hydroxyfluorene dia afaka mivadika ho fluorenone amin'ny alàlan'ny famokarana.
Mandritra izany fotoana izany, ny vovo-dronono Raw Hydrafinil (9-Fluorenol) dia mpitsabo mpanentana mahaliana, manohitra ny torimaso sy ny tsy fanekena. Fanafody sy pro-drug of modafinil (fantatra ihany koa amin'ny hoe Provigil) - fitambarana ampiasain'ny mpanamory fiaramanidina Airforce amin'ny asa fitoriana lava mba hiambina sy hiambina. Hydrafinil (aka 9-Fluorenol) koa dia ohatran'ny eugeroic nootropic izay mitovitovy amin'ny fihetsik'i Modafinil. Tany am-piandohana dia niompana fikarohana izy io mba hampiroboroboana ny fahamendrehana sy ny fahamalinana. Noho ny fahitana azy ho mpitsabo, dia lasa malaza eo anivon'ireo mpampiasa nootropic nandroso izy. Ny mahaliana, ny mpampiasa dia mitatitra fa tsy mampisy fihenan-kery kokoa noho ny Modafinil, fa ny fahafaha-manatsara kokoa ny fampandrosoana. Ny tombontsoa hafa dia mitatitra ny fampivoarana ny mason-tsivana, ny fanentanana mihamitombo, ny fanamafisana ny feo manintona, ny fiasa mahomby sy ny fahaiza-mianatra.
Hydrafinil (9-Fluorenol) powder (1689-64-1) Ny fomba fiasa?
Mbola tsy fantatra ny fepetra hentitra. Na dia izany aza dia misy rafitra vitsivitsy mety havoaka. Voalohany indrindra, inoana fa mety hampiasa fitaovam-pandrefesana goavam-be ny dopamine, izay midika fa manatsara ny haavon'ny neurotransmitter dopamine ny hydrafinil (9-Fluorenol).
Faharoa, nihevitra ny Hydrafinil (9-Fluorenol) ho toy ny mpanohitra mpanohitra mpanohitra 5-HT6. Ny mpanolo-tsay 5-HT6 dia hita ao amin'ny rafi-pitantanana afovoan-tsolika (CNS) ary hita fa ny fanakanana azy ireo dia mety hitarika amin'ny fampivoarana ny fahaiza-manaon'ny kognita amin'ny paradigma fianarana sy fahatsiarovana maro. Ankoatr'izany, ny serotoninina sy ny rafitra dia manana anjara asa manan-danja amin'ny fanaraha-maso ny saina sy ny fitondran-tena. Noho izany, ny sasany amin'ireo fanatsarana mamaitra notaterina taorian'ny fampiasana Hydrafinil (9-Fluorenol) dia nomena io rafitra io.
soa of Hydrafinil (9-Fluorenol) powder (1689-64-1)
Mitombo ny fahamalinana sy ny fahatsapana
Reraka sy reraka
Tsara kokoa ny fifantohana
Nampiasa hery ara-tsaina
Hafa noho ny vokatra
soso-kevitra Hydrafinil (9-Fluorenol) powder (1689-64-1) Dosage
Na ahoana na ahoana, dia tsara foana ny manomboka amin'ny doka kely indrindra, ary vao mainka mitombo izany raha vao fantatrao ny vokany. Ny doka mahazatra amin'ny vovobony Hydrafinil dia 50 amin'ny 100 mg indray mandeha isanandro, ny dosage tsaratsara kokoa noho io dosage io.
Side effects of Hydrafinil (9-Fluorenol) powder (1689-64-1)
Ny vokatry ny fiasan'ny hydrafinil dia azo oharina. Anisan'izany ny aretin'andoha, ary ny tsy fahampian-drano. Nisy koa ny fitarainana momba ny fahaverezan'ny fiankinan-doha.